सधै गीत माग्न जान्थें एकदिन छोरी मागेर आएँ —संगीतकार गैरे सुरेश - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
गैरे सुरेश नेपाली संगीत क्षेत्रको प्रसिद्ध नाम । जागिरे मिसनको शिलशिलामा हाल सुडानको डार्फरमा रहेका सुरेश केहिदिन पहिले बिदामा नेपाल आएका थिए । उनी आज अर्थात सोमबार राती फेरी कर्मक्षेत्र उडदै छन । हामी संगको भेटमा उनले सांगीतिक र पारिवारीक रमाइला प्रसंग साटेका छन । प्रस्तुत छ उनको कुरा उनकै लयमा ।
अहिलेको कुरा अर्कै छ भने पछि उहाँ हाँस्नुभयो
म कृष्णहरि बराल सर संग २०५८ देखि सम्पर्कमा छु । उहाँ संग मैले शुरुको एल्बम गरेको हो । अहिले उहाँ ससुरा बुबा हुनु भयो । म अहिले उहाँलाई ड्याडी भन्छु । सजिलो चाँहि मलाई सर भन्न लाग्छ किनभने पहिलाबाट नै त्यही भनिरहेको भयो । अठार उन्नाईस वर्ष देखि उहाँ संग छु । संगै मिलेर सांगीतिक कामहरु गर्दै गयौ । कृष्णहरि बराल सरको एउटा किताबको सबै गीत मलाई कण्ठ थियो । अहिले पनि त्यो गाउ भन्नुहुन्छ भने म गाईदिन्छु । उहाँकोमा गए अनि सर मैले संगीत गरेकोे छु भने । आनन्द कार्की सरको आवाज“ए गजल की धुन आऊँ”भन्ने गीत मैले गाए । हामी एक अर्का संग यति नजिक भयौ कि कथाले अर्को मोड लियो । बीचमा मैले सर्भिस जोईन गरेँ त्यो पछि सरले अहिले किन युद्धको बेलामा विदेश जान लागेको संगीत र पढाईमा यति राम्रो हुुनुहुन्छ । बरु यता लेक्चरको काम गर्न निजामतिमा जागिर खाने तर जाने होईन प्रहरीमा भन्नुभयो ।
मैले चाँहि रिक्स लिएर पनि जानु पर्छ यस्तो अवस्थामा भने । मेरो अहिलेको श्रीमती त्यही थिईन । कुराकानी हुन्थ्यो स्विकृती हो उनको नाम । उनी संग कुराकानी भईरहन्थ्यो । हामीले एक अर्कालाई मन पर्छ भनेर कहिले पनि भनेनौँ । उनको बोली व्यवहारबाट उनी मलाई रुचाउँछिन भन्ने मैले थाहा पाईसकेको थिए किनभने मेरो जस्तो सुकै सिर्जनालाई पनि उनले राम्रो छ भन्थिन । त्यो ग्रह मिलेको भन्छ नि त्यस्तै । मैले पनि आज बुबाले के भन्नुभयो त भनेर फोनमा सोध्ने गर्थे । तर मैले नराम्रो सोंचाईको साथमा सोधेको होईन किन भने त्यो घर मेरो लागि परिवार जस्तै थियो । त्यहीबीचमा म लाईबेरिया गए । त्यहाँ गएर आईसके पछि बीचमा हाम्रो फेसबुकमा कुराकानी भई रहन्थ्यो । उनको पनि घरमा विवाहको कुरा चलेछ । दिदीको बिहे भई सकेको थियो ।
प्रपोज नै गरेको त्यस्तो केही पनि होईन । तर मैले प्रसंङ्ग बस म माग्न आऊ त लेखेँ । पहिला उनलाई त सोध्नु पर्यो । ऊनी अचम्म परिन । मन छ र अप्ठ्यारो छैन भने आउनु भनिन उनले पनि । विदेशबाट आएपछि म उनको घर गए र भने तपाई मेरो लागि संगीतकोे गडफादर नै हुनुहुन्छ । कृष्णाहरि बराल अहिलेको दिनमा नभएको भए गैरे सुरेश आजको दिनमा हुदैन्थ्यो । तर, अहिलेको कुरा अर्कै छ भने पछि उहाँ हाँस्नुभयो । सरहरु मेरो आफ्नो घर परिवार झै हुनुहुन्थ्यो । घरमा स्विकृतिको विवाहको कुरा चलेको रहेछ । मेरो पनि घरमा विवाहको कुरा चलेको छ । मिल्छ भने केटा मै हो घर हेर्न जानुहुन्छ भने पाल्पा जानुहोस । सहमती भने म विवाहको लागि तयार छु । मैले उनलाई रुचाउँछु उनले मलाई रुचाउँछिन कि नाई भन्ने कुरा उनैलाई सोध्नुहोस भने । त्यो मैले प्रश्न गरेपछि सर सरप्राईज हुनुभयो । उहाँले गीत माग्न आउनेले छोरी माग्न आयो भन्नुभयो होला । मलाई त्यो बेलामा अलिकति प्रेसर पनि थियो ।
कपाल र दाह्री काटेर फे्रस भएर म सूट पाईन्ट लगाएर घर गएको थिए । मेरो कुरा सुनेपछि स्विकृतिको बुबा ममी चकित हुनुभयो । कहाँ यस्तो हुन्छ भन्न थाल्नुभयो । मैले ममीलाई अहिलेलाई मैले कुरा मात्र पो राखेकोे हो त कहाँ अहिले नै लिएर जान्छु भनेको हो त । तपाईलाई मनपर्छ भने हुन्छ भन्नु कि के कुराले हुन्न भनेर मेरो चित्त बुझाउँनु कि त सबै कुरा राम्रो हुन्छ भनेर म तपाईको चित्त बुझाउँछु । दुई जनामा एउटाले त चित्त बुझाउँनुपर्यो नि । त्यो भनेपछि मेरो अहिलेको श्रीमती स्विकृतिलाई बोलाउनु भयो । त्यो पछि सुरेश जीले यस्तो भन्नु भएको छ के हो तँ पनि रुचाउँछेस भनेर सोध्नु भयो । त्यो पछि हो भनेर ऊ गएपछि ममी एकछिन रिसाउनु भयो । तर, सरले भने कहिले गर्ने भन भन्नुभयो । मैले जेठमा माग्न आएको छु विवाहको लागि माघ सम्म किन कुर्ने भने । पहिलो डेट जहिले छ त्यहीले गर्ने भनेर निधो भएपछि हाम्रो विवाह भएको हो । त्यसमा चाहि डेट जाने लव लेटर लेख्ने केही पनि भएन ।
धेरै सुरेश हुँदा म गैरे सुरेश भए
त्यो बेलामा सुरेश अधिकारी, सुरेश प्रान्जली, सुरेश कुमार, सुरेश दर्पण पोखेल देखि लिएर धेरै जना सुरेशहरु बजारमा चल्नुभएको थियो । त्यो बेलामा भने नाम पछाडी टाईटल राख्ने ट्रेन्ड पनि चलेको थियो । सपनाश्री, आलोक श्री जस्तो चलन चलेको थियो । एक जना दिग्गज मान्छेले नै गैरे भएन सुरेश अरु नै केही राखौँ भन्नुभयो । त्यो पछि मैले यही नाम राखेको हो ।
म निम्न स्तरिय गाउँले परिबेशबाट आएको हो । मेरो दिमागमा सुरेश तेरो धरातल यो हो है भनेर घचघचाई रहन्थ्यो । गाउँबाट एउटा मान्छे राजधानी आउँदा जे जे मा अवसर देख्छ त्यसमा हात हाल्छ । मैले एस.एल.सी. दिएको एकाईस वर्ष भयो । त्यो बेलामा हरेक स्तरमा कामगर्न प्रयास गरिन्थ्यो । आफूले केही गर्नुपर्छ है भन्ने हुन्छ । अहिलेको बच्चाको दिमागमा आफ्नो धरातल र तिमी केही गर्न सक्छौ भनेर उत्प्रेरणा गर्न खोज्यौ भने उसको जिवनमा केही हुन्छ जस्तो लाग्छ । मलाई पनि त्यही कुराले आर्कषण गरेको हो । म पढाईमा पनि राम्रो थिए । कक्षामा प्रथम हुन्थेँ । म स्कुलमा पढाउँथे । एक दिन मेरो साथी राजेश थापाले हार्मोनियम बजाएको देखेर मैले उसलाई सिकाईदेऊ न भने । त्यो पछि मैले बिस्तारै संगीत सिक्नथालेँ । डोरेमी सङ्गीत पाठशालामा गएर गुरु संग सङ्गीत सिकेँ । भानुभक्त ढकाल, ईश्वर अमात्य सरहरुले मलाई सङ्गीत सिकाउनु भएको हो । त्यो पछि म सङ्गीतमा लागेको हो ।
अठार सय तलवमा मास्टर बने
काठमाडौँको नोबेल एकेडेमी जाने बाटोमा गाँउको दाई भेट हुनु भयो । उहाँले भाई किन गाउँ जाने यतै बस्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो । यहाँ बसेपछि पैसा त पक्कै चाहियो । विज्ञापन खुल्यो पत्रिकामा । डिप्लोमा पास गरेको, दुई वर्षिय अनुभव भएको, पढाईमा राम्रो दख्खल भएको । त्यो पछि मैले त्यहाँ फोन गरेर मैले भर्खरै एस.एल.सी. दिएको हो । तर, म तपाईलाई अरुले भन्दा राम्रो पढाउन सक्छु भनेर विश्वास दिलाउन भने सक्छु किनभने म जिल्ला टपर हो । तपाईलाई ब्याचलर पास गरेको केटा नै चाहिएको हो भने म केही भन्न सक्दिन । तर, एक पटक मैले पढाएको कक्षा हेर्नु न त भनेर फोन गरेँ । छ सात कति जना थियौ । मैले कक्षा लिए ।
त्यो पछि म सेलेक्ट भए । त्यो बेलामा मेरो तलब अठार सय थियो । त्यहाँँ पढाए त्यो पछि मेरो एउटा मामालाई मेरो अब एक्सपिरियन्स भयो अब मलाई राम्रो स्कुलमा पढाउनु मन छ भने । त्यो पछि मैले ताहचलको होली भिजन भन्ने स्कुलमा छ वर्ष पढाए । त्यहाँ पढाउँदै र पढ्दैँ जाने क्रममा मलाई म ब्याचलर कहिले सक्छु भन्ने भयो । मेरो रिजल्ट पुसमा आयो । त्यसमा म राम्रो संग पास भए । त्यति बेला नै सशस्त्र प्रहरीमा, निजामतीमा खुलेको थियो । जति ठाँउमा खुलेको थियो । त्यो सबै ठाँउमा फर्म भरेँ । यो कुरा लेखेर राख्नु होला । म छ महिनामा स्कुल छोड्छु । भनेर स्कुलमा भने । २०६० सालमा भरेँ २०६१ साल सशस्त्र प्रहरीमा नाम निस्कियो ।
आफ्नो धरातल कहिल्यै बिर्सिनु हुन्न
कलेज पढाउँदा पनि म सङ्गीतमा निरन्तर थिए । मैले शक्ति बल्लभ ज्यूको छोरालाई टिउसन पढाएको छु । त्यो बेलामा होम टिउसन पढाएको धेरै पैसा पाईन्थ्यो । अहिलेको पुस्तालाई धेरै कुरामा सजिलो छ । हरेक बुबा आमाले आफ्नो छोरा छोरीलाई सामान्य विद्यालयबाट रातो बङ्गलामा हालिदिन थाल्नु भएको छ । महगो स्कुलमा हाल्ने त भयो तर, संस्कार र प्रवृति नहाल्ने भयो । उसलाई आफ्नो दुखहरु भन्नु पर्यो । तेरो परिवार यसरी आएको हो, तेरो साथीहरुको अरु होला तर तेरो हैसियत यो हो है भनेर भन्नु पर्यो ।
आफ्नो पनि धरातल कहिल्यै बिर्सिनु हुन्न । अहिले म सन्तुष्ट छु डिग्री गरेँ काम पनि गरिरहेको छु । आफूमा खुबी र गर्न सक्ने क्षमता छ भने कामगर्ने अवसर यहाँ पनि छ । घुम्ने र रमाईलो काम गर्नु पर्छ तर हैसियत भने बिर्सिनु हुन्न । हामीले आफूले गरेको काममा शिर उचा राख्न सक्नुपर्छ । विध्वंश गर्न निकै सजिलो छ । तर, त्यसलाई राम्रो बनाउन निकै समस्या लाग्छ । स्कुलको मास्टरहरुले विद्यार्थीलाई तिमीले गर्न सक्छौ भनेर भन्नुपर्छ ।